जब यी महिलाले शरीरमै कम्प्युटर जडान गरिन तब चल्न थाले पाटपूर्जा ! – Ujyaalo Patrika
जब यी महिलाले शरीरमै कम्प्युटर जडान गरिन तब चल्न थाले पाटपूर्जा !
कोही मानिस दु,र्घटनामा परेपछि उसको दैनिकी निकै कष्टकर बन्छ, यो स्वभाविक पनि हो । स्वस्थ्य रहँदा सबै काम गर्न सक्ने मानिस दुर्घटनामा परेपछि अरुमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन् ।
दु,र्घटनामा शरीरको कुनै अंगले काम गर्न सकेन भने त अरुमाथि आश्रित हुनुको विकल्प हुँदैन । तर अमेरिकाकी एक महिला इन्जिनियरले भने दुर्घटनामा परेर शरीरले काम गर्न नसकेपछि आफ्नो शरीरमा नै कम्प्युटर जडान गरेकी छन् । जसको सहायताले उनी आफ्ना हरेक काम आफै गर्ने क्षमता राख्दछिन् ।
Previous यस्तो ठाउँ जहाँ पुरुष नपाएर छट्पटाउँछन युवती
Next चोरीका लागि गएको चोर : चोरि गरेको घरभित्रै निदाएपछि…